बाल मन्दिरले बनाउन दिएन विद्यालयको पर्खाल- समाचार - कान्तिपुर समाचार
भाद्र २५, २०७६ दामोदर न्यौपाने
लिंगो होइन, यः सिं
इन्द्रजात्राको यः सिंलाई लिंगो भन्ने गरेकोमा नेवार समुदायले आपत्ति जनाउँदै आएका छन् । संस्कृतिविद् यज्ञमानका अनुसार यःसिंलाई लिंगो भन्नु विकृति हो । ‘य: भनेको राम्रो हो । सबैले मन पराएको हो,’ वज्राचार्य भन्छन्, ‘सिं भनेको काठ हो । सबैले मन पराएको काठ भएकाले यसलाई नेपाल भाषामा यःसिं भनियो ।’
पुजारीको तलबसमेत नगण्य दिने गरेको छ । यहाँका सबै मठमन्दिरमा दिनहुँ नित्य पूजा गर्नुपर्छ । यो पूजा गरेबापत गुठीले वर्षभरिमा जम्मा १५ हजार रुपैयाँ मात्रै बढाउँछ । ‘दिनहुँ मन्दिर रुँग्नु पर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘वर्षमा १५ हजारले के गर्नु ? कसलाई भन्नु ? कहाँ जानु गुनासो गर्न ? कति गुनासो गर्नु ?’ धार्मिक, परोपकारी र सांस्कृतिक कार्य सञ्चालन गर्न स्थापना भएको हो गुठी संस्थान ।
पर्वपूजा, जात्रा मात्रै होइन गुठी जग्गाको रेखदेखको जिम्मेवारी पनि पाएको छ संस्थानले । इन्द्रजात्रा, सेतो मच्छेन्द्रनाथको जात्रा, साँखु, दक्षिणकाली, कीर्तिपुरको जात्रालगायत अदृश्य सम्पदाको पूजा खर्च गुठीले व्यहोर्दै आएको छ । यही संस्थानको स्थापना भएपछि जात्रा पर्व मनाउन अभिशापको दिन सुरु भएको शाक्य बताउँछन् । पहिला जात्रा पर्व मनाउन दुःख थिएन ।
प्रकाशित : भाद्र २५, २०७६ ०८:१५